Daawo muuqaalka: Wasiirka Kheyraadka oo Dawo gaarsiiyay isbitalka B/weyne |
Daawo muuqaalka: Wasiirka Kheyraadka oo Dawo gaarsiiyay isbitalka B/weyne
Wefdigii uu hogaaminaya wasiirka qeyraadka ee maanta gaaray magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa gar gaar caafimaad gaarsiyey isbitalka magaaladaasi oo ay jiifaan dad badan oo cudurka Shuban biyooda uu so ritay.
Wasiirka kheyraadka xukuumadda Soomaaliya Mudane C/risaaq Cumar Maxamed oo maanta gaaray magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa booqasho ku tagay deegaanka Ceel Jaale ee duleedka magaalada B/weyne halkaas oo ay ku jiraan dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka.
Wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay dhaqtarka ciidanka dowladda Jabuuti ee gacanta ku haya xarun lagu daweynayo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka waxa uuna sheegay in labadii maalin ee la soo dhaafay uu aad u yaraatay tirade dadka uu ku dhacayo cudurka.
Sidoo kale wasiirka ayaa booqday isbitalka weyn ee magaalada B/weyne halkaas oo ay ku jiraan dad qaba xanuuno kala duwan isagoona isbitalka gaarsiiyay dawo hal tan ah.
C/risaaq Cumar Maxamed oo la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay in booqashada uu ku tagay magaalada B/weyne ay tahay mid uu ugu guurgalayo xaalada caafimaad ee dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka.
Agaasimaha guud ee waaxda Caafimaadka ee wasaaradda hormarinta adeegga bulshada Ducaale Aadan ayaa dhankiisa tilmaamay in gurmad dawo ah ay gaarsiyeen isbitalka magaalada B/weyne si loogu dabiibo dadka qaba cudurka shuban biyoodka.